Zvinyorwa zveLavon Temple pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Lavon Tembere
Mugovera, Kukadzi 15, 2014 Mugovera, Kukadzi 15, 2014 Lavon Tembere
Ndakaenda kuIndipurapfu AMA chisvusvuro apo Joel Book akataura nezveKushambadzira kune Simba reMumwe. Mharidzo yake yaive neruzivo rwakawanda rwakakomberedza kushandisa kushambadzira kwedhijitari kushandira vatengi zvinobudirira. Kunyangwe, paive nezvakawanda zvakatorwa kubva pachirongwa, paive neimwe yakanamatira kwandiri. Pfungwa yekuti: kushandira ndiko kutengesa kutsva. Chaizvoizvo, iyo pfungwa yekuti kubatsira mutengi inoshanda zvakanyanya pane kugara uchiedza kuzvitengesa. Sei
Yadonha zvinoreva kudzoka kuchikoro kunotenga kuri kuzara uye vadzidzi vari munzira kudzokera kukirasi. Nekudaro, Nguva. Ziva kuti kunyangwe iri Nyamavhuvhu chete, vanhu vakati wandei vatotanga kutarisa mune zvipo zvipo. Kana vakaiwana nemutengo wakakodzera, ivo vanoenda kumberi uye vanotenga kuti vave pamberi pemutambo. Isa maemail ako kune vateereri uye emaimeri emaemaini kuti utore vatengi vacho. Of
Email Kushambadzira Muitiro: Uchishandisa Akasarudzika Maitiro muZvinyorwa Zvikamu
Muvhuro, July 23, 2012 China, November 22, 2012 Lavon Tembere
Pakati peZuva raValentine gore rino, ndakaona masangano akati wandei achishandisa moyo mune yavo mutsara mutsara. (Zvakafanana nemuenzaniso uri pazasi) Kubva ipapo, ini ndaona makambani mazhinji uye akawanda achitanga kushandisa zviratidzo mumitsara yenyaya yavo kuti vabate muverengi. Kushandisa akasarudzika mavara mune wenyaya mutsara ndeimwe yazvino maemail maitiro uye mazhinji masangano ari kutotamba kukwira. Nekudaro, kana usati,
Chinyorwa Chekunyorera - Kana iwe uri kushanda neemail yekushambadzira agency, ivo vangangove vatove nehukama nemumwe wako uyo anopa iwo mavara ekunyorera chinhu. Rugwaro rwekunyorera chinhu chikuru cheshambadziro reemail. Iwo maoko kubva padanho rekukura rako rekutumira email. Vako email vatengesi vanotora nguva yekumisikidza izvi iwe ugere pasi uye uchiona ichimhanya. Nesimba shoma, iwe uchaona kuti sei
"Gore-pamusoro-gore, kubva munaKurume 2011 kusvika Kurume 2012, email inovhura pane nharembozha yakakura 82.4 muzana," sekureva kweRed Path Path manhamba. Kugadzira nharembozha yeemail yako ekushambadzira kuedza haisisiri yeemhando yepamusoro eemail mishandirapamwe; icho chinodikanwa. Munguva pfupi yapfuura, Delivra yakaburitsa Maitiro Ekuita Yako Email Kushambadzira Neshamwari, chishandiso chinopa 2012 nharembozha, manhamba, uye mazano ekuti ungaita sei kuti yako email kushambadzira igadzirire kune vako-pa-kuenda vateereri. Muchena anokurukura